Amazon na !wa! | Martech Zone
Wednesday, December 21, 2011 Thursday, June 18, 2015 Andrew Davis dee
Amazon ugbu a guzo dịka otu n'ime isi mmalite ahịa kachasị ike n'ụwa. Site na ọtụtụ nde ndị ahịa na-agba ịnwụ anwụ na ndị na-akwado ya, ọ bụghị naanị ndị ọzọ na-ere ahịa aka na na offline, mana ọwa ahịa ịntanetị niile.
Ngwaahịa kachasị ọhụrụ nke Amazon, nke Kindle Fire, were ụfọdụ nkatọ mara mma n'izu gara aga. Ka o sina dị, ire ahịa ka na-ada oke egwu, ya na karịa nde 1 A na-ere ụdị (gụnyere ọkụ Fire) kwa izu maka izu nke atọ n'usoro.
Dika otutu uzo ahia di egwu, Amazon bara uru obughi nani ndi ahia kamakwa na otutu puku ndi ahia na ndi nkwusa ndi na edeputa ihe ha na ahia na site na ahia ahia ahia ahia Amazon nke Amazon, Mgbasa ozi Amazon.
Lelee infographic ahụ (A Atụmatụ CPC Nke mbu!) Iji hu ka Amazon si agha ya bu ndi ya na ya di oke ahia ahia ahia ahia nke uwa ahia.
Tags: amazonatụmatụ cpcecommerce
Disemba 21, 2011 na 10:54 mgbede
Daalụ nke ukwuu maka ikesa ndị a. Enwere ọtụtụ ezigbo akụrụngwa ebe a. Eji m n'aka na m ga-aga ebe a ọzọ n'oge adịghị anya.